ဝက်ခြံမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ? - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
ဝက်ခြံမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ? Beauty4u မှ ဝက်ခြံကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း Tips လေးတွေပြောပြပေးပါရစေ။
နောက်လဲအမြဲတမ်း အလှအပဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများတင်ပေးမှာမို့ Page ကို Like & Follow လုပ်ထားပေးပါအုံးနော်။
အဆီ၊ဖုန်မှုန့်၊ချွေး တို့ကြောင့် ဝက်ခြံဖြစ်တာမို့ နေ့တိုင်း (၂) ကြိမ်ခန့် မျက်နှာကို သန့်စင်အောင် မျက်နှာသစ်ဆေးဖြင့် ဆေးကြောပေးရပါမယ်။ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ တအားမပူသော ရေနွေးနွေးလေးဖြင့်သစ်ပေးပါ။ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ မိမိ၏လက်ချောင်းများကို စက်ဝိုင်းပုံစံဖြင့် ညင်သာစွာဆေးကြောပေးပါ။ ထို့နောက်သန့်ရှင်းသော ပဝါဖြင့်သုတ်ပေးပါ။
မိမိရဲ့အသားရည်အမျိုးအစားက ဘာလဲ … အဆီပြန်တတ်တာလား? အသားခြောက်တာလား? သာမန်အသားအရည်ပဲလား? Sensitive skin type လား? ဘယ်အသားအရည်မဆိုဝက်ခြံထွက်နိုင်ပါတယ်။ အဆီပြန်သူတွေကတော့ ဝက်ခြံပိုထွက်လေ့ရှိပါတယ်။ မိမိအသားအရည်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Skin Care ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ skin care ကို အသုံးပြုမှသာ ဝက်ခြံထွက်ခြင်းကင်းဝေးစေမှာပါ။
ရေများများသောက်ပေးပါ။ ရေသောက်ခြင်းဟာ အသားအရည်စိုပြေစေရုံမက ဝက်ခြံထွက်ခြင်းအား လျော့နည်းစေပါတယ်။ ၁ ရက်ကို ရေ ၂ လီတာခန့် အနည်းဆုံးသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ Moisturizer အသုံးပြုပေးခြင်းဟာလဲ ဝက်ခြံကာကွယ်ခြင်းအတွက်ထိရောက်ပါတယ်… သို့သော် အဆီဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းတဲ့ အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
မိတ်ကပ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ သို့သော် ဝက်ခြံထွက်နေစဉ်အချိန်မှာ အရမ်းထူပြီး အဆီဓာတ်များတဲ့ မိတ်ကပ်မျိုးရှောင်သင့်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး သဘာဝဆန်တဲ့ မိတ်ကပ်မျိုးသာ လိမ်းချယ်ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။
(၅) နေရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်ခြင်း
နေရောင်ခြည်ကြာမြင့်စွာ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းဟာ အသားအရည်ကိုခြောက်သွေ့စေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မျက်နှာမှ အဆီဓာတ်ကိုပိုမိုထုတ်ပေးသဖြင့် ဝက်ခြံပြသနာကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။ နေရောင်ထဲထွက်တိုင်း sun protector လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ နေ့စဉ်သုံးလျှင်ပိုမိုသင့်တော်ပြီး oil free sun protector အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။
(၆) လက်ဖြင့် ထိခြင်း ညစ်ခြင်း
ဝက်ခြံများ မျက်နှာမှာပေါက်နေပါက လက်ဖြင့်မကြာမကြာကိုင်ခြင်း ထိခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါ။ လက်မှ ပိုးဝင်ခြင်းများဖြစ်တတ်သဖြင့် ကိုင်တွယ်လိုပါက လက်ကိုသေချာစွာသန့်စင်ပြီးမှ ကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ်။
(၇) ပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုခြင်း
ဝက်ခြံများအလွန်များပြားဖြစ်ပေါ်နေပါက ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ထံ ပြသသင့်ပါတယ်။ သို့မှသာ ဆရာဝန်မှ လိုအပ်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးပေးကာ သင့်တော်သော ကုထုံးဖြင့် ဆက်လက်ကုသပေးခြင်းဖြင့် ဝက်ခြံအရှင်းပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
Thanthumar Road, South Okkalapa Township
PRP သွေးရည်ကြည်ကုထုံး 50% promotion
Special Promotion Discount တွေရှိလို့ တန်မှတန်နော် 🌟🌟🌟
December Special Promotion Discount
Laser Hair Removal Program ကို 60% Discount
❄️ အသားဖြူကုထုံး အထူး promotion ❄️